၂၆ ဝဂ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဤဆောင်းပါးကို ဓမ္မပဒ နှင့် ပေါင်းစပ်ရန် အကြံပြုထားပါသည်။ (ဆွေးနွေးရန်)
ဓမ္မပဒ တရားဒေသနာတော်တွင် သဘောတူရာ ပေါင်းစပ်ထားသော ဝဂ် (၂၆) ဝဂ် ရှိသည်။ လူအမျိုးမျိုးတို့၏ စိတ်သဘောထားအမျိုးမျိုးကို လိုက်၍ မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခဲ့သော တရားပေါင်းစုံ ပါရှိသဖြင့် တရားတော် ညွန့်ပေါင်းကျမ်းလည်း ဖြစ်သည်။
ဤလောက၌ ရန်တုံ့မူခြင်းဖြင့် ရန်သူတို့သည် ဘယ်အခါမျှ မငြိမ်းအေးနိုင်ကုန်။ ရန်မတုံ့မူခြင်းဖြင့်သာ ရန်အေးနိုင်ကုန်၏။ ဤသဘောကား ရှေးရိုးစဉ်လာ ဓမ္မတာပင်တည်း။
မကောင်းမှုပြုသောသူသည် ဤဘဝ၌ စိုးရိမ်ရ၏။ တမလွန်ဘဝ၌ စိုးရိမ်ရ၏။ ပစ္စုပ္ပန် တမလွန် နှစ်တန်သော ဘဝတို့၌ စိုးရိမ်ရ၏။ ထိုသူသည် မိမိ၏ ညစ်နွမ်းသော ကံကိုသိ၍ စိုးရိမ်ရ၏။ ပူပန်ရ၏။
ထကြွလုံ့လရှိသောသူ၊ သတိရှိသောသူ၊ စင်ကြယ်သော ကံသုံးပါး ရှိသောသူ၊ စူးစမ်းဆင်ခြင်၍ ပြုလေ့ရှိသောသူ ၊ ဣန္ဒြေကို စောင့်စည်းသောသူ၊ တရားသဖြင့်အသက်မွေးသောသူ၊ မမေ့မလျော့သောသူအား အခြံအရံ အကျော်အစောသည် တိုးပွား၏။
ပညာမဲ့၍ မိုက်သောသူတို့သည် မေ့လျော့ခြင်းကို အားထုတ်ကြကုန်၏။ ပညာရှိသည်ကား မမေ့လျော့ခြင်းကို အမြတ်ဆုံးသော ဥစ္စာကဲ့သို့ စောင့်ရှောက်၏။
အလွန်တရာ မြင်နိုင်ခဲထသော၊ အလွန်တရာ သိမ်မွေ့ထသော၊ အလိုရှိရာ အာရုံ၌ ကျရောက်ကျက်စားလေ့ရှိသော စိတ်ကို ပညာရှိသည် စောင့်ရှောက်ရာ၏။ စောင့်ရှောက်ထားအပ်သော စိတ်သည် ချမ်းသာသုခကို ဆောင်ရွက်၏။
သူတစ်ပါး၏ မသင့်လျော်သော အပြစ်ဒေါသကို မကြည့်ရှုရာ။ သူတစ်ပါးတို့၏ ကောင်းမှု မကောင်းမှု ပြုမပြုကို မကြည့်ရှုရာ။ မိမိ၏ ကောင်းမှု မကောင်းမှု ပြုမပြုကိုသာလျှင် ကြည့်ရှုရာ၏။
ပန်းတို့၏ ရနံ့သည် လေညာသို့ မရောင်နိုင်ပေ။ စန္ဒကူး၊ တောင်ဇလပ်၊ ကြက်ရုန်းတို့၏ ရနံ့သည်လည်း လေညာသို့ မရောက်နိုင်ပေ။ သူတော်ကောင်းတို့၏ သီလတည်းဟူသော ရနံ့သည်ကား လေညာသို့ ရောက်နိုင်၏။ သူတော်ကောင်းတို့၏ ဂုဏ်သတင်းသည် အရပ်မျက်နှာအားလုံးသို့ သင်းပျံ့လွှမ်းမိုးနိုင်၏။
လူမိုက်တို့သည် မိမိမိုက်သည့် အပြစ်ကို သိ၏။ ထိုသို့ သိခြင်းကြောင့် ပညာရှိ ဖြစ်နိုင်သေး၏။ လူမိုက်သည် ငါပညာရှိဟု မိမိစိတ်ကို အထင်ရောက်ပါမူကား ထိုသူကို လူမိုက်စင်စစ်ဟု ခေါ်ဆိုရပေမည်။
ယောက်မသည် ဟင်း၏ အရသာကို မသိသကဲ့သို့ လူမိုက်သည် အသက်ရှည်သမျှ ကာလပတ်လုံး ပညာရှိကို ဆည်းကပ်နေသော်လည်း သူတော်ကောင်းတရားကို မသိနိုင်ချေ။
လျှာသည် ဟင်း၏ အရသာကို ချက်ချင်းသိသကဲ့သို့ သိကြားလိမ္မာသောသူသည် ပညာရှိကို တစ်ခဏမျှ ဆည်းကပ်ရစေကာမူ သူတော်ကောင်း တရားကို လျင်မြန်စွာ သိနိုင်၏။
ဆုံးမရာ၏။ ကြိုတင်ဆုံးမရာ၏။ မကောင်းသော အပြုအမူတို့မှလည်း တားမြစ်ရာ၏။ ထိုသို့ဆုံးမတတ်သောသူကို သူတော်ကောင်းတို့ ချစ်ခင်မြတ်နိုးအပ်၏။ သူတော်ကောင်း မဟုတ်သူတို့ကား မချစ်ခင် မနှစ်သက်ကြပေ။
ယုတ်မာသော မိတ်ဆွေတို့ကို မဆည်းကပ်ရာ။ ယုတ်မာသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့ကို မဆည်းကပ်ရာ။ မိတ်ဆွေကောင်းတို့ကို ဆည်းကပ်ရာ၏။ ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို့ကို ဆည်းကပ်ရာ၏။
တစ်ခဲနက်သော ကျောက်တောင်သည် အရပ်လေးမျက်နှာမှ လာသောလေကြောင့် မတုန်လှုပ်သကဲ့သို့ ပညာရှိတို့သည် ချီးမွမ်းခြင်း၊ ကဲ့ရဲ့ခြင်းတို့ကြောင့် မတုန်လှုပ်ကြကုန်။
တရားကို ကောင်းမွန်စွာသိ၍ ကိလေသာမှ လွတ်ပြီးသော ငြိမ်သက်သော တာဒိဂုဏ်နှင့် ပြည့်စုံသော ထိုရဟန္တာ၏ စိတ်သည် ငြိမ်သက်၏။ နှုတ်အမူအရာသည်လည်းကောင်း၊ ကိုယ်အမူအရာသည်လည်းကောင်း ငြိမ်သက်၏။
သီလရှိသော ပုဂ္ဂိုလ်အား ရိုသေစွာ ရှိခိုးလေ့ရှိသော၊ အသက်ကြီးသော၊ ဂုဏ်သိက္ခာကြီးသော ပုဂ္ဂိုလ်တို့အား အရိုအသေပေးလေ့ရှိသောသူအား အသက်ရှည်ခြင်း၊ အဆင်းလှခြင်း၊ ချမ်းသာခြင်း၊ ခွန်အားကြီးခြင်းဟူသော အကျိုးတရားလေးပါးတို့ တိုးပွားကြကုန်၏။
စိတ်သည်မကောင်းမှု၌ မွေ့လျော်တတ်၏။ ကောင်းမှုပြုသောသူအား နှုန့်နှေးတတ်ရကား စိတ်ကိုမကောင်းမှုမှ တားမြစ်ရာ၏။ ကုသိုလ်ကောင်းမှုကို ဆောလျင်စွာ ပြုရာ၏။
အနည်းငယ်မျှသော မကောင်းမှုသည် အကျိုးသက်ရောက်လာလိမ့်မည် မဟုတ်ဟူ၍ မကောင်းမှုကို အထင်မသေးရာ။ မိုးရေမိုးပေါက်တို့ ကျဖန်များသောအခါ ရေအိုးသည် ပြည့်လာဘိသကဲ့သို့ အနည်းငယ်မျှသော မကောင်းမှုများကို ဆည်းပူးဖန် များလတ်သော် လူမိုက်သည် မကောင်းမှုဖြင့် ပြည့်၏။
တစ်စုံတစ်ယောက်ကိုမျှ ကြမ်းတမ်းသော စကားကို မဆိုရာ။ အဆိုခံရသူတို့သည် သင့်ကို တုံ့ပြန်၍ ဆိုရာ၏။ ချုပ်ချယ်သော စကားသည် ဆင်းရဲခြင်း၏ အကြောင်းတည်း။ သူတစ်ပါးကို ဒဏ်ခတ်လျှင် သင့်ထံသို့ အတုံ့အလှည့် ဒဏ်များရောက်လာကြကုန်ရာ၏။
အကြားအမြင်နည်းလှသော ဤယောက်ျားသည် နွားလားကဲ့သို့ အချည်းနှီး ကြီးထွားလာ၏။ ထိုယောက်ျားသည် အသားတို့သာ တိုးပွားလာ၏။ ပညာမူကား မတိုးပွားချေ။
သူတစ်ပါးကို ဆုံးမသည့်အတိုင်း မိမိကိုယ်ကို လိုက်နာပြုကျင့်ရာ၏။ မိမိကိုယ်တိုင် ယဉ်ကျေးပြီးမှသာသူတစ်ပါးကို ဆုံးမရာ၏။ မိမိကိုယ်တိုင် ယဉ်ကျေးအောင် ဆုံးမခြင်းသည် ခဲယဉ်းစွတကား။
ကျောက်မှဖြစ်သော စိန်သည် မိမိမှီရာ ကျောက်ကို ထွင်းဖောက်ဖျက်ဆီး သကဲ့သို့ မိမိသည် ပြုအပ်သော၊ မိမိကြောင့် ဖြစ်ပေါ်လာသော မကောင်းမှုသည် မိမိတည်းဟူသော ပညာမဲ့သူကို ဖျက်ဆီး၏။
သုစရိုက်တရားကို ကျင့်ရာ၏။ ဒုစရိုက်တရားကို မကျင့်ရာ။ တရားကို ကျင့်သောသူသည် ဤလောက၌ လည်းကောင်း၊ တမလွန်လောက၌ လည်းကောင်း ချမ်းသာစွာနေရ၏။
သစ္စာတရား တစ်ခုကို ကျော်လွန်၍ မုသားစကားဆိုလေ့ရှိသော နောင်ဘဝအတွက် ဆင်ခြင်စဉ်းစားခြင်း အလျှင်းမရှိသောသူအား မပြုနိုင်မည့် မကောင်းမှုဟူသည် မရှိနိုင်ချေ။
အကြင်သူသည် မြတ်စွာဘုရားကိုလည်းကောင်း၊ တရားတော်ကိုလည်းကောင်း၊ သံဃာတော်ကိုလည်းကောင်း ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်၏။ ထိုသူသည် ဒုက္ခ၊ ဒုက္ခ၏ ဖြစ်ပေါ်ကြောင်း၊ ဒုက္ခ၏ လွတ်မြောက်ရာ၊ ဒုက္ခ၏ ချုပ်ငြိမ်းရာသို့ ရောက်စေတတ်သော မြတ်သောအင်္ဂါရှစ်ပါး ရှိသော မဂ္ဂသစ္စာဟူသော အရိယမဂ္ဂသစ္စာလေးပါးတို့ကို မဂ်ပညာဖြင့် ကောင်းစွာသိနိုင်၏။
လူမိုက်နှင့် ပေါင်းသင်း၍ လှည့်လည်သွားလာနေရသောသူသည် အချိန်ကြာမြင့်စွာ စိုးရိမ်ရ၏။ လူမိုက်တို့နှင့် ပေါင်းသင်းနေရခြင်းသည် ရန်သူနှင့် ပေါင်းသင်းနေရသကဲ့သို့ အခါခပ်သိမ်း ဆင်းရဲရ၏။ ပညာရှိသူနှင့် ပေါင်းသင်းရခြင်းသည် ဆွေမျိုးတို့နှင့် ပေါင်းသင်းရသကဲ့သို့ ချမ်းသာ၏။
သီလနှင့်လည်းကောင်း၊ ဉာဏ်ပညာနှင့်လည်းကောင်း ပြည့်စုံသော တရား၌တည်သော၊ အမှန်တရားကို သိတတ်သော၊ မိမိပြုရမည့်ကိစ္စကို သိတတ်သောသူကို လူအပေါင်းသည် ချစ်ခင်မြတ်နိုး၏။
"အိုအတုလ"၊ ကဲ့ရဲ့ခြင်းသည် ရှေးရိုးစဉ်လာပေတည်း။ ဤ ကဲ့ရဲ့ခြင်းသည် ယခုမှ ဖြစ်ပေါ်လာသည် မဟုတ်ချေ။ ဆိတ်ဆိတ်နေသူကိုလည်း ကဲ့ရဲ့ကြကုန်၏။ များစွာဟောပြောသူကိုလည်း ကဲ့ရဲ့ကြကုန်၏။ ချင့်ချိန်ပြောသူကိုလည်း ကဲ့ရဲ့ကြကုန်၏။ လောက၌ အကဲ့ရဲ့ မခံရသူဟူ၍ မရှိချေ။
လုံးလုံးလျားလျား အကဲ့ရဲ့ခံရသူသည်လည်းကောင်း၊ လုံးလုံးလျားလျား အချီးမွမ်းခံရသူသည်လည်းကောင်း၊ ရှေးယခင်က မရှိခဲ့ဖူးချေ။ နောင်မှာလည်းရှိလာမည် မဟုတ်ချေ။ ယခုလည်း မရှိပါချေ။
စာပေကျမ်းဂန် အတတ်ပညာတို့သည် သင်အံရွတ်ဖတ်မှု မပြုခြင်းလျှင် ပျက်စီးကြောင်း အညစ်အကြေး ရှိကုန်၏။ အိမ်တို့သည် ဂရုစိုက်ခြင်း မပြုလျှင် ပျက်စီးကြောင်း အညစ်အကြေး ရှိကုန်၏။ မေ့လျော့ခြင်းသည် စောင့်ရှောက်သူတို့၏ ပျက်စီးကြောင်း အညစ်အကြေး ဖြစ်၏။ ပျင်းရိခြင်းသည် အဆင်းလှခြင်း၏ ပျက်စီးကြောင်း အညစ်အကြေး ဖြစ်၏။
မချွတ်မယွင်း တရားနှင့်အညီ သူတစ်ပါးတို့ကို အနိုင်အရှုံး ဆုံးဖြတ်ပေးသော ပညာရှိကို တရားစောင့်သော၊ တရား၌တည်သော တရားသူကြီးဟု ဆိုအပ်၏။
ငြူစူတတ်သော၊ ဝန်တိုတတ်သော၊ ကောက်ကျစ်စဉ်းလဲတတ်သောသူသည် ကောင်းသောစကားကို ပြောဆိုကာမျှဖြင့်လည်းကောင်း၊ ရုပ်အဆင်း လှပကာမျှဖြင့်လည်းကောင်း ကောင်းသောသဘောရှိသည် မမည်ပေ။
ဝစီဒုစရိုက်ကို ရှောင်ကြဉ်ခြင်းဖြင့် နှုတ်ကို စောင့်ရှောက်ရာ၏။ စိတ်ဖြင့် မနောဒုစရိုက်ကို ကောင်းစွာ စောင့်စည်းရာ၏။ ကိုယ်ဖြင့်လည်း အကုသိုလ်ကို မပြုရာ၏။ ထို ကမ္မပထတရားသုံးပါးတို့ကို သုတ်သင်ပြီးလျှင် ဘုရားရှင်ဟောကြားတော်မူသော မဂ်ကို ပြီးစေရာ၏။
သူတစ်ပါးအား ဆင်းရဲကို ဖြစ်စေလျက် မိမိ၏ ချမ်းသာကို အလိုရှိသောသူသည် ရန်နှင့်ရန်ချင်း ရောနှောခြင်းဖြင့် ရန်မှမလွတ်နိုင်ချေ။
ရှက်စရာမဟုတ်သည်၌ ရှက်တတ်ကုန်၍ ရှက်စရာမဟုတ်သည်၌ ရှက်တတ်ကုန်သော မှားသောအယူရှိကုန်သော သတ္တဝါတို့သည် ဒုက္ခိတဘဝသို့ ရောက်ကြကုန်၏။
ယဉ်ကျေးသော ဆင်၊ မြင်း စသည်တို့ကိုသာ ပွဲသဘင်သို့ ဆောင်ယူကုန်၏။ ယဉ်ကျေးပြီးသော ဆင်၊ မြင်း စသည်တို့ကိုသာ မင်းသည် စီး၏။ ကျူးလွန်စော်ကားသော စကားကို သည်းခံနိုင်သောသူသည် ယဉ်ကျေးပြီးဖြစ်၍ လူတို့တွင် အမြတ်ဆုံး ဖြစ်၏။
စည်းစိမ်ဥစ္စာတို့သည် ပညာမဲ့သူကို ဖျက်ဆီးကုန်၏။ နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသော တစ်ဖက်ကမ်းကို ရှာမှီးသူတို့ကိုကား မဖျက်ဆီးနိုင်ကုန်။ ပညာမဲ့သူသည် စည်းစိမ်ဥစ္စာကို တပ်မက်ခြင်းဖြင့် သူတစ်ပါးကို ဖျက်ဆီးသကဲ့သို့ မိမိကိုယ်ကိုလည်း ဖျက်ဆီး၏။
စင်ကြယ်သော အသက်မွေးခြင်း ရှိကုန်သော မပျင်းရိသော မိတ်ဆွေကောင်းတို့ကို ဆည်းကပ်လော့။ အာမိသ။ ဓမ္မဟူသော ပဋိသန္ဓာရ တရားတို့နှင့် ပြည့်စုံရာ၏။ ကျင့်ဝတ်တို့၌ လိမ္မာရာ၏။ ထိုအကြောင်းတရားတို့ကြောင့် ဝမ်းမြောက်ခြင်း များပြားသည်ဖြစ်၍ ဒုက္ခ၏ အဆုံးကို ပြုလတ္တံ့။
အကြင်ပုဂ္ဂိုလ်အား ကိုယ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ နှုတ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ စိတ်ဖြင့်လည်းကောင်း၊ မကောင်းမှု ပြုလုပ်ခြင်းမရှိပေ။ ကိုယ်၊ နှုတ်၊ စိတ် သုံးပါးလုံးဖြင့် စောင့်ရှောက်သော ထိုပုဂ္ဂိုလ်ကို ဗြာဟ္မဏဟူ၍ ငါဘုရား ဟောကြား၏။
↑ ရင်နှစ်သည်းချာ နိုင်ငံ့ရတနာ ဆုံးမစာများ (ဒုတိယအကြိမ် ed.)။ အခြခံပညာ ဦးစီးဌာန။ စက်တင်ဘာလ ၁၉၉၂။ pp. ၂၄၅။ |date= ရှိ ရက်စွဲတန်ဖိုး စစ်ဆေးရန် (အကူအညီ)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=၂၆_ဝဂ်&oldid=660207" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၈ ဇွန် ၂၀၂၁၊ ၁၃:၂၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။